Isihloko se-Ultrasonic: phytochemicals - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ama-Phytochemicals"
I-Phytochemical yigama lesambulela elenzelwe isitshalo (igama lesilingo “phyto” isho isitshalo) amakhemikhali, afaka izinhlobonhlobo ezahlukahlukene zezinto ezenzeka ngokwemvelo ezitshalweni. Ama-phytochemicals amaningi ayaziwa ngemiphumela yawo ezuzisayo empilweni yabantu futhi ngenxa yalokho ayizakhi ezibaluleke kakhulu zokudla okunempilo. I-Terpenes, phytosterols, isothiocyanates, organosulfides, stylbenes, isoflavonoids, alkaloids, phenic acid ne-anthocyanides ngamaqembu amancane kakhulu we-phytochemicals, afaka ama-phytochemicals amaningi anjenge-caffeine ne-theobromine (alkaloids); i-allicin, glutathione ne-sulphoraphane (organosulfides); i-ptherostilbene ne-resveratrol (stylbenes); noma i-epicatechin, i-naringin ne-quercitin (flavonoid) ukusho nje abambalwa.
Ukuze usebenzise i-phytochemicals njengezidakamizwa noma izithasiselo ezinomsoco, amakhemikhali wesitshalo kumele ahlukaniswe ne-cell matrix. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela enamandla nethembekile yokukhipha ama-phytochemicals ezitshalweni ezifana nemifino, amakhambi, izithelo, izimpande namagxolo. Imishini yokukhipha i-Ultrasonic isetshenziswa ngezinga elincane nelikhulu, isb. Ukukhiqizwa kwe-terpenes kusuka kwi-hemp ne-cannabis, i-quercetin kusuka kuma-apula, itiye no-anyanisi, i-allicin kusuka ku -galikhi, i-caffeine evela kwikhofi, ifomu leobromine le-cocoa ubhontshisi noma i-ellagic acid ipomegranate.
Amagagasi amakhulu e-ultrasound asetshenziselwa ukudala i-acoustic cavitation, amabutho ayo e-shear aphazamisa izindonga zeseli futhi akhanyise ama-phytochemicals aqhamuka engaphakathi esitokisini ayongena solvent. Njengendlela engeyona eyokushisa, ukukhishwa kwe-ultrasonic kuvimbela ukonakaliswa okushisayo kwama-complements abhekene nokushisa futhi kuholele kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu. Ukusebenza kahle kokukhishwa okuphezulu, (cishe) ukukhishwa okuphelele, ukucubungula ngokushesha kanye nokusebenza okuphephile kuyizinzuzo ezengeziwe zokukhishwa kwe-ultrasonic.
Funda kabanzi ngamaprosesa we-ultrasonic nokusetshenziswa kwawo ekukhipheni i-phytochemical!